विश्वकपमा फर्किनेमा सलाह विश्वस्त » खबरहरुको एउटै केन्द्र
विश्वकपमा फर्किनेमा सलाह विश्वस्त
मंगलवार, जेष्ठ १५, २०७५ १५:३४ मा प्रकाशित !
च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा काँधको चोट बोकेका मोहमद सलाहको आसन्न विश्वकपमा मैदानमा देखा पर्ने विश्वास
लिभरपुल र इजिप्टका स्ट्राइकर मोहमद सलाहले आसन्न रसिया विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा फर्कने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । किभमा शनिबार भएको च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा रियल म्याड्रिडका सर्जियो रामोसँग जुध्दा सलाहको काँधमा चोट लागेको छ । लिभरपुलका प्रशिक्षक जर्गेन क्लोपले सलाहको चोट गम्भीर रहेको बताएका छन् । तर, सलाह स्वयं भने आफू विश्वकपमा फिट हुने दाबी गर्छन् ।
काँधको लिगामेन्ट च्यातियो
इजिप्ट फुटबल संघले सलाहको एक्सरे रिपोर्टमा काँधको लिगामेन्ट च्यातिएको जनाएको छ । संघले आफ्ना स्टार खेलाडी तीन सातापछि हुने विश्वकपमा फर्किनेमा आशावादी रहेको बताएको छ । सलाहको एकल प्रदर्शनमै इजिप्टले तीन दशकपछि विश्वकपमा स्थान पक्का गरेको थियो ।
गत सिजनमा एस रोमाबाट ३ करोड ४० लाख पाउन्डमा लिभरपुलमा उनी आबद्ध भएका थिए । लिभरपुलमा पहिलो सिजनमै सलाह सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गर्न सफल रहे । लिभरपुलमा समग्रमा उनले ४४ गोल गरे । इंग्लिस प्रिमियर लिगमा सलाहले एक कीर्तिमान राखेका छन् । उनले सर्वाधिक ३२ गोल गरे ।
यसपटकको विश्वकपमा हेर्नलायक खेलाडीमा सलाह पनि पर्छन् । तर, च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा बोकेको चोटका कारण उनका समर्थक दुःखी छन् । उनले शनिबारको रात निकै गाह्रो भएको बताए । तर, आफूलाई एक लडाकुका रूपमा बताएका सलाहले विश्वकपमा राष्ट्र र समर्थकलाई खुसी बनाउन मैदानमा उत्रने विश्वास दिलाएका छन् । ‘समर्थकको माया र हौसलाका कारण म विश्वकपमा देखा पर्नेछु, कसैलाई निरास बनाउँदिनँ,’ उनले भने ।
PREVIOUS POST Previous post: भोलि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुँदै
NEXT POST Next post: बजेट पारित, अर्थमन्त्री बजेट प्रस्तुत गर्दै (लाइभ)
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, जेष्ठ १५, २०७५ १५:३४
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, जेष्ठ १५, २०७५ १५:३४
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, जेष्ठ १५, २०७५ १५:३४
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, जेष्ठ १५, २०७५ १५:३४
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, जेष्ठ १५, २०७५ १५:३४